Eritreritra mandalo - Namana Serasera.org
Ny : 23/11/2009
Vao nampidirina eto amin'ny namana serasera indray ny atao hoe Eritreritra mandalo. Ny Eritreritra mandalo dia toerana hampidiranao izay zavatra mandalo ao an'eritreritrao ka tianao hozaraina amin'ny namana rehetra. Jereo ao amin'ny mombamomba anao dia ampidiro izay eritreritra mandalo.
Strong3 - 09/01/2015 11:29
7% izany no fiakara-karama azony mpiasam-panjaka kou; dia mahay makasitraka ry gasy kely ôh
ataovy mahampy izay misy fa amin'ny heritaona toa izao indray vao hisy
ambony hono izany raha oharina amin'ny fisondrotrin'ny vidim-piainana
hihihih de gaga enao
asa ilay trano na mba firy % ny mpiasa no ahazo izany de iza no tsinjovina amin'izany ? __ ny efa manana ve sa mba ireo apombo lahy tena mifofotra amin'ny asa mafy hihih asa eeeh!!!
Mba misy mahalala ve oe hikarakara fety ny omby manga? Mba zarao ny Trl ndry zareo zà fa tena tehahita Gasy @ faran'ny taona!
Ny momba ity raharaham-pirenena ity no mba asiana resaka kely,maro ny olona ankehitriny no tonga saina marina @zava misy eto @ firenena "soa lavo hono ahay amindra hoy ny fitenenantsika Malagasy",ny ahy dia hoe ny zavatra atomboka dia tsy maintsy misy farany avokoa fa ny an'ny olona matakatra lavitra dia ny fitsinjovana io farany io no imasoana dieny eny ampiandohana.
Tsetsatsetra tsy aritra iny dia mba nozaraina ho antsika manao veloma finaritra daholo
3. Canada Goose jacken